ဝါးခယ်မ : မြို.လေးဆီ က ဗိုလ်ချုပ် ရာပြည်.ပွဲ အကြို
ဒုတိယအကြိမ် ညှိုနှိုင်း အစည်းအဝေး ( Photo from Khin Cho Oo )
တစ်နိုင်ငံလုံးနှင်.ဆိုင်သော ၊ တစ်မျိုးသားလုံးနှင်.ဆိုင်သော သူမို. သူ၏အခမ်းအနားများကလည်း မည်သူမဆို အားလုံးနှင်.သက်ဆိုင်ပေသည် ။
ညီညွတ်သော မြို.လေးမို. မိမိတို. ခံယူ / ယုံကြည်ရာ ကို လွတ်လပ်စွာ လုပ်ကိုင်ကြသလို တူညီစုပေါင်း လုပ်ကိုင်ကြရမည်. လုပ်ငန်းများတွင်လည်း ညီညွတ်စွာ လုပ်ကိုင်ကြမြဲ ဖြစ်သည် ။
၂၀၁၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက်နေ.တွင် ကျရောက်မည်. အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၏ နှစ် ၁၀၀ ပြည်.မွေးနေ.အခမ်းအနားကို မြို.လေးတွင်လည်း အဖွဲ.အစည်း အသီးသီး မှ ညီညွတ်စွာ ပူးပေါင်းဆင်နွဲကြမည်ဖြစ်သည် ဟုသိရပါသည် ။
ပထမအကြိမ် အကြိုညှို နှိုင်း မှုကို ဒီဇင်ဘာ ပထမပတ် ခန်.ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဒုတိယအကြိမ်မြောက် အကြို အစည်းအဝေးကို ၁၁ - ၁၂ - ၂၀၁၄ နေ.၊ တတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးကို ၂၄ - ၁၂ - ၂၀၁၄ နေ.ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို.သိရပါတယ် ။ သာသနာ.ဗိမ္မာန်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးကနေ အခမ်းအနားကျင်းပမှု ဖြစ်မြောက်ရေး ပူးပေါင်းကော်မတီ တစ်ရပ် ဖွဲ.စည်းခဲ့ပြီး နာယကများအဖြစ်
v ဦးသုမင်္ဂလ - တိုင်းသံဃာ့ ဝန်ဆောင်ဆရာတော် - မန္တလေးကျောင်းတိုက်
v ဦးဓမ္မသာမိ - ဥက္ကဌ - မြို.့နယ်သံဃာ့ မဟာနာယက - ရ္ပာလယ်ကျောင်းသစ်စာသင်တိုက်
v ဦးဝိမလ - အတ္ပင်းရေးမှုး - မြို.့နယ်သံဃာ့ နာယကအဖ္ပဲ့ 
v ဦးပညာသီရိ - ဥက္ကဌ - အမျိုးဘာသာသာသနာ စောင့် ရှောက်ရေးအဖ္ပဲ့- ကံလှကျောင်းတိုက်
v ဦးဝိမလ -အတ္ပင်းရေးမှုး - အမျိုးဘာသာ သာသနာစောင့် ရှောက်ရေးအဖ္ပဲ. - ဒက္ခိဏာရုံ ၀ါးကျောင်းဆ၇ာတော် တို. တာဝန်ယူထားတယ်လို.သိရပါတယ် ။
အဲ့ဒိကော်မတီမှာ ပါဝင်တဲ့ အဖွဲ.အစည်းတွေက
1. အမျိုးဘာသာစာသနာစောင့် ရှောက်ရေးအဖ္ပဲ့ (၀ခမ)
2. သာသနာ့ ရက္ခိတအဖ္ပဲ့ (၀ခမ)
3. အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖ္ပဲ့ ချုပ်(၀ခမ)
4. ခောတ်သစ်ပြည်သူ့ ပါတီ(၀ခမ)
5. စာပေချစ်လူငယ်များအဖ္ပဲ့ (၀ခမ)
6. စီးပ္ပားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအဖ္ပဲ့ (၀ခမ)
7. ပညာဒါနကော်မတီ(၀ခမ) တို.က အဖွဲ.အစည်းတွေအနေနဲ. ပါဝင်ပြီး မြို.သူ/မြို.သားများ နှင်. ဋ္ဌာနဆိုင်ရာတွေရဲ. ပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ. ပြုလုပ်သွားမှာလို. သိရပါတယ် ။
ကျင်းပမယ်. အခမ်းအနားအစီအစဉ်တွေမှာ ( ၁ ) နှစ်၁၀၀ပြည့် အထိမ်းအမှတ်စာပေဟောပြောပ္ပဲ ကျင်းပခြင်း ( ၂ ) စာစီစာကုံး / ကာတ္ပန်း /ကဗျာ ပြိုင်ပွဲ နဲ. မိန်.ခွန်းပြောပြိုင်ပွဲ များကျင်းပခြင်း ( ၃ ) သံဃာအပါး၁၀၀အား အာရုဏ်ဆွမ်းလောင်းလှူခြင်း နှင်. ဆ္ပမ်းဆန်စိမ်းလောင်းလှူခြင်းတို. ပါဝင်တယ်လို. သိရပါတယ် ။
ဒါ.အပြင် ဗိုလ်ချုပ် ရုပ်တု ပြုလုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း တစ်ခုလည်း ပါဝင်ပြီးဝါးခယ်မမြို့လှေကျင်းရပ်က္ပက်မြူ ရုံးလမ်း မှ ပန်းချီ - ပန်းပု - မြန်မာမှု ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ကိုမျိုးကျော် က တာဝန်ယူ ဖန်တီးမှာဖြစ်တယ်လို.သိရပါတယ် ။ အဲ့ဒိဗိုလ်ချုပ်ရုပ်တု ကိုတော. လွတ်လပ်ရေးကျောက်တိုင်ကွင်း အတွင်း - ရွှေခယ်မြိုင် ထမင်းဆိုင် ရှေ.ဘက် မှာ ပြုလုပ်ထားရှိမှာဖြစ်ပြီး ၂၈ ရက် ၁၂ လ ၂၀၁၄ နေ.ညနေ ၄ နာရီမှာ မြေသန်.ပရိတ်ရွတ်ခြင်း ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီး ၃ ရက် ၁ လ ၂၀၁၅ မှာ ပန္နက်ရိုက်ပြီး လုပ်ငန်းစတင်မှာလို.သိရပါတယ် ။
အဲ့ဒီင်္လုပ်ငန်းများ နဲ.ပတ်သက်လို. လှုဒါန်းလိုသူများအနေနဲ. အောက်ပါတို.ထံဆက်သွယ်လှုဒါန်းနိုင်ကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ် ။
Ø ဒေါက်တာဦးဝင်းရှိန် - ၀၉ ၄၂၂၄၄၉၉၅၂
Ø ဒေါ်မြင်.မြင်.စန်း - ပြည်သူ.လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် - ၀၉ ၇၃၂၀၆၄၆၉
Ø ဦးမောင်မောင်ဋ္ဌေး - ဧရာဝတီသား ပို.ဆောင်ရေး - ၀၉ ၂၅၉၃၇၇၈၅၈
Ø ဗိုလ်ကြီး စိုင်းညွန်.ရွှေ ( ငြိမ်း ) - ၀၉ ၃၁၈၁၀၈၂၅
Ø ဦးအောင်မျိုး - စွန်မင်း ဆိုင်ကယ်/စက်ဘီး နှင်. အပိုပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေး - ၀၉ ၈၅၃၇၁၀၂
Ø ဆရာမ ဒေါ်ခင်ချိုဦး - ၀၉ ၄၂၂၄၈၀၀၉၂
Posted by မင်းသီဟ (Min Thiha) at 2:11 PM